Sergio Ramos Oo Laga Saaray Kulanka PSG Ee Real Madrid
HomeWararka CiyaarahaSergio Ramos oo laga saaray kulanka PSG ee Real Madrid
February 15, 2022 Wararka Ciyaaraha, Champions League, Horyaalka France, Horyaalka Spain 0
Sergio Ramos ayaa ka maqan PSG kulanka Champions League ee Real Madrid .
Ramos ayaa dhaawac muruqa ah ku seegaya usbuucan kulanka Champions League ee kooxdiisii ​​hore ee Real Madrid sida ay sheegtay kooxda reer France.
Si kastaba ha ahaatee, weeraryahankii hore ee Barcelona Neymar ayaa u muuqda mid ku soo laabanaya kooxda PSG , inkastoo aysan u badneyn inuu taam u noqdo kulankaan, maadaama uu ka soo laabanayo dhaawac muddo laba bilood ah.
” Sergio Ramos waxa uu sii wadi doonaa tababarka kaligiis ka dib dhaawacii kubka,” PSG ayaa tiri Isniintii. “Cusbooneysi dheeri ah ayaa la bixin doonaa usbuuc gudihiis.”
Isagoo 36 jir ah, Ramos ayaa si xor ah ugu biiray PSG xagaagii hore isagoo kaga soo biiray Madrid, iyadoo labada kooxood ay ku kulmeen lugta hore ee 16-kii kulan ee ugu dambeeyay Talaadada magaalada Paris.
Ilaa hadda, waxaa lagu xaddiday shan kulan oo kaliya dhaawacyo soo gaaray, isagoo dhaliyay hal gool. Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Spain ayaa rajeynaya inuu taam u noqdo kulanka lugta labaad ee ka dhici doona Bernabeu bisha March.